विवाहित जीवनलाई कसरी बनाउने रोमाञ्चक ? – Karnalisandesh
विवाहित जीवनलाई कसरी बनाउने रोमाञ्चक ?
प्रकाशित मितिः ११ आश्विन २०७७, आईतवार ०८:५९ September 27, 2020
काठमाडौँ। हरेक विवाहित सम्बन्धमा स–साना समस्या हुनु भनेको साधारण हो तर यदि यी स–साना समस्या समय हुँदा नै हल गरिएन भने यसले विकराल रुप लिन बेर लगाउँदैन । धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो नीजि जीवनबारे खुलेर कुरा गर्नबाट बच्छन् । यी समस्यालाई टाढा राख्नका लागि रिलेशनशिप एक्सपर्टका केही सल्लाह मानिसहरुलाई काम लाग्न सक्छ । आउनुहोस् यसबारे जानकारी लिऔं ।
पार्टनरबाट आफ्नो लागि मात्रै आशा नराख्नुहोस्, जति तपाईंले आफूलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि त्यति नै आफ्नो पार्टनरलाई पनि दिनुहोस् । तपाईंहरुको विचार एकै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने छैन तर अलग–अलग पिचारको सम्मान गर्न पनि आवश्यक छ।